တရုတ်ဂိုးရယ်ဆိတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
တရုတ်တောင်ဆိတ် (Naemorhedus griseus)၊ မီးခိုးရောင် မြီးရှည်ဆိတ်ဟုလည်း သိကြသည့် ဆိတ်ငယ်ကလေး မျိုးစိတ် တမျိုးဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်ထူထပ်သော ဒေသများ၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ အန္ဒိယ၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် လာအိုတွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ အချို့သော ထိုနေရာများတွင် အလွန်အကျွန် အမဲလိုက်ခံနေရသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘာဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးသမဂ္ဂဂမှ ထိခိုက်လွယ်သော မျိုးစိတ်များ"vulnerable species" အဖြစ် စာရင်းတွင် ထည့်သွင်း ပြုစုထားသည်။
၂ Distribution and habitat
တရုတ်တောင်ဆိတ်သည် တောဆိတ်တမျိုးနှင့် ဆိတ်အကြား ဟိုမကျ ဒီမကျရှိပြီး ပခုံးအမြင့် ၅၀ မှ ၇၈ စင်တီမီတာ(၂၀ မှ ၃၁ လက်မ) နှင့် အရှည် ၈၂ မှ ၁၃၀ စင်တီမီတာ (၃၂ မှ ၅၁ လက်မ) အထိကြီးထွားသည်။ သန်မာသည့် ခြေလက်အင်္ဂါနှင့် ကျယ်ပြန့်သည့် ခွာများရှိသည်။ ဦးချိုသည် တိုပြီးကတော့ပုံရှိကာ နားရွက်များသည် ချွန်ပြီး အတော်အသင့် ရှည်သည်။ သားမြတ်နှစ်စုံပါသည့် သိုး၊ ဆိတ်တို့နှင့် ကွဲပြားမှုရှိပြီး ၎င်းတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်စုံသာပါသည်။ The coat consists ofashort, dense under layer and an upper layer of longer, semierect, coarse guard hairs. မီးခိုးရောင်ဖျော့ဖျော့မှ အနက်ညိုရောင်သို့မဟုတ် နီညိုရောင်အထိ အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ နောက်ကျောတွင် အနက်ရောင်အစင်းကြောင်းရှိပြီး လည်တိုင်နှင့် အောက်အစိတ်အပိုင်းသည် အရောင်ဖျော့သည်။ 
Distribution and habitat[ပြင်ဆင်ရန်]
တရုတ်တောင်ဆိတ်သည် အရှေ့တောင်အာရှဒေသဖွားများ ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်၊ မြန်မာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း၊ ဗီယက်နမ် မြောက်ပိုင်းတစ်လျှောက်နှင့် လာအိုမြောက်ပိုင်း အထိကျယ်ပြန့်ပြီး ဝေးခေါင်သည့် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်တွင် အများဆုံးရှိသည်။ ၎င်းသည် တောင်တန်းမျိုးစိတ်များဖြစ်ပြီး ကြမ်းတမ်းသည့် နေရာများ၊ လက်လှမ်းမမှီသောနေရာများ၊ မတ်စောက်သောတောင်စောင်းများနှင့် ကုန်းပြင်မြင့်များတွင်တွေ့ရသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျောက်ဆောင်ဒေသများတွင် နေထိုင်သည်။
တရုတ်တောင်ဆိတ် များသည် ၁၂ ကောင်ပါဝင်သည့် အုပ်စုငယ်များဖြင့် သီးခြားနေထိုင်ကြသော်လည်း အသက်ကြီးသည့် အထီးများသည် တကိုယ်တည်းနေထိုင်ကြသည်။ ယင်းတို့သည် သတိ ရှိ၍ အနားယူကြကာ ၊ ဝံပုလွေနှင့် ကျားသစ်ကဲ့သို့သော သားကောင်များကို ရှောင်ရှားနိုင်သည့် မြင့်မားသော ကျောက်ဆောင် တောင်စောင်းများတွင် အချိန်ဖြုန်းကြသည်။ ဆောင်းတွင်းကာလတွင် မြေပြန့်သို့ ပြောင်းရွှေ့ကြသည်။ အများအားဖြင့် ချုံပုတ်များနှင့် အရွက်များကိုသာ ရှာဖွေလေ့ရှိပြီး မြက်ပင်၊ အခွံမာသီးနှင့် ဝက်သစ်ချသီး တို့ကိုလည်းစားသုံးကြသည်။ Breeding takes place in late spring when one or two kids are born afteragestation period of about 215 days. အကောင်ပေါက် ကလေးများသည် မွေးပြီးမကြာမီလမ်းလျှောက်နိုင်ပြီး ဆောင်းဦးရာသီတွင် နို့ကွာကြကာ ဆောင်းတွင်း တစ်လျှောက်လုံး မိခင်နှင့်အတူ ရှိနေတတ်သည်။
တရုတ်တောင်ဆိတ် ရင်ဆိုင်နေရသည့် အဓိက ခြိမ်းခြောက်မှုမှာ အမဲလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်များသည် အသား၊ သားမွှေးနှင့် တိုင်းရင်းဆေးများတွက်လည်း သတ်ဖြတ်ခြင်းခံနေရသည်။ ၎င်းတို့သည် လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာများတွင်ရှိသော်လည်း အခြားနေရာများတွင်မူ ကောင်ရေကျဆင်းနေသည်။ ယင်းသည် အလွန်အကျွံ အမဲလိုက်ခြင်းကြောင့်ဟု ယူဆရပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘာ ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးသမဂ္ဂ ကတရုတ်တောင်ဆိတ်အား ထိခိုက်လွယ်သော မျိုးစိတ်များ အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ Duckworth, J.W. (2008). "Naemorhedus griseus". IUCN Red List of Threatened Species 2008. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T14303A4430834.en. [လင့်ခ်သေ]
↑ ၂.၀ ၂.၁ Chinese goral။ Woodland Park Zoo။ 2014-09-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တရုတ်ဂိုးရယ်ဆိတ်&oldid=716574" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။